उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘सीमा समस्या विरासतकै रुपमा आएको छ’ – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२१ श्रावण २०७७, बुधबार ०४:४० English
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘सीमा समस्या विरासतकै रुपमा आएको छ’
काठमाडौँ, २० मंसिर । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले मूलुकको सीमा समस्या विरासतकै रुपमा आएको बताएका छन् । सीमा बचाऔं अभियानका अभियानकर्मीहरूले तयार पारेको नक्सा ग्रहण गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सीमा विवादमा वर्तमान सरकारलाई दोष नलगाउन आग्रह गरे ।
‘सीमा विवाद हिजोदेखिकै हो, केपी ओली सरकारको पालामा आएर यस्तो भएको नभन्नुहोला’, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरासम्मै रहेको भएपनि पछि गायब भएको बताए । ‘चुच्चो नक्सा कुन बेलादेखि गायब भयो छाम–छाम छुमछुम गर्ने हो भने परैसम्म पुगिन्छ’ उनले भने ।
अभियानका संयोजक भैरव रिसाल, डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, सोनाम साथी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, कमल बराललगायतले सुगौली सन्धिअनुसारको पश्चिम नेपालको सीमा कायम भएको नक्सासहित उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
२० मंसिर २०७६, शुक्रबार ११:४६ मा प्रकाशित